ZUVA DZOSE NESENTENCES MUGERMAN, Chidzidzo cheIndaneti cheIndaneti | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » German Times uye Mitsara » ChiGerman Nguva Yakare (Prasens) Dzidzo
Chidzidzo cheGermany-nguva yakawanda, hurukuro yeGermany-nguva yakawanda, hurukuro yakawanda yeGermany-nguva, maitiro echiJerman-nguva-refu, 9. kirasi German nguva yakawanda
GERMANY ZUVA RAKUVA
Chirungu chemajini-nguva huru, mienzaniso uye maitiro.
Muchidzidzo chino tichaongorora nguva yakaoma muGermany.
Kushandiswa kwemashoko akazara muGermany kwakafanana nenguva yemazuva ano.
Mune mamwe mazwi, mitsara iyo yakagadzirirwa munezvino
Zvinyorwa zvinowanikwa kune vanhu, verb conjugation, nezvimwe. zvakafanana nezvino
uye hatingadzokeri pano.
Kudzidza nguva ino zvakare kunoreva kudzidza nguva yakareba.
Nguva yakafara inowanzoenderera mberi, panguva ipi zvayo, kazhinji kana mune dzimwe nguva
kudzokorora mabasa, zviratidzo.
Nguva yemazuva ano: kuenda kumitambo
nguva yakakura: enda kumitambo
Nguva yezvino: kudzidza German
nguva huru: Ndinodzidza chiGerman
Izvo pamusoro apa zvirevo zvechiito.
Muchidzidzo chinotevera, tichaenderera kune zvinyorwa zvemashoko.
KUFUNGA IZVI: German Numbers uye German Numbers Numeri
Lingoes Mushanduri - A Comprehensive Dictionary
Homemade mask inoshandura vhudzi jena kuita chena ruvara
TAGS: 10. kirasi german nyaya inotaura, 9. kirasi German nguva yakawanda, 9. kirasi german nyaya inotaura, Nguva yakakura yezvidzidzo muGerman, Mutauro weGermany-nguva huru, ChiGerman chakawedzerwa nguva, Mutauro weGermany-nguva huru
03 May 2015, 15: 07
Iwe unokwanisa kutsanangura chiGermany chiripo uye remangwana zvakadzama here?
31 January 2016, 16: 06
Nguva dzeGerman nguva hurukuro, rumbidzai ler
Ona Nhoroondo Yese ya Selma akati:
06 Mart 2016, 10: 46
Ndinoda kukuudza nezvezuva rangu muchikoro chekuChikoro chekuchikoro.
usingagumbuswi neni akati:
Ive iri nhoroondo huru chaizvo, thanks.
14 November 2016, 22: 27
sa i head akati:
Zvidzidzo zvakanaka zveGerman